လူမှာ တပ်မဲ့ ဘရိတ် – The Only Way To Go!
Posted on October 28, 2011 October 28, 2011 by barnay
ဘရိတ် တဲ့ ဘာဘရိတ်လဲ ဆိုတာ သိချင်နေပါလိမ့်မယ် ။ ကားတွေ ၊ စက်ဘီးတွေ ၊ လေယဉ်တွေ စသဖြင့် အရှိန်နဲ့ သွားလာတဲ့ ယဉ်မှန်သမျှမှာ အရှိန်ထိန်း ဘရိတ်တွေ တပ်ထားကြတာ သိကြမှာပါ ။ ထို့အတူပဲ ကျနော်ဆိုလိုတဲ့ ဘရိတ်ဟာလည်း လူမှာ တပ်ဆင်တဲ့ ဘရိတ်တမျိုးပါပဲ ။ ဘရိတ်ဆိုတာဟာ စီးဆင်းနေတဲ့ အရှိန်ကို အရှိန်နှေးနှေးသွားပြီး ရပ်တန့်စေဖို့ ထိန်းတဲ့ ကိရိယာပါ။
ထူးဆန်းတယ်လို့ မဆိုလိုချင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းသလိုဖြစ်အောင် ဘရိတ်ဆိုပြီး သုံးနှုန်းလိုက်တာပါ။ ကျနော်တို့တတွေ နေ့စဉ် နိစ္စဓူဝ နယ်ပယ်မှာ .. အတွေးအမျိုးမျိုး ၊ အမြင်အမျိုးမျိုး ၊ အာရုံအမျိုးမျိုး စသဖြင့် တွေ့ကြုံနေရပါတယ် ။ အဲ့ဒီအရာတွေကြားထဲမှာ ကျနော်တို့တတွေဟာ အာရုံခံသတ္တဝါတွေမို့ အာရုံတွေရဲ့ စေစားရာနောက်ကို သတိမပါပဲ လိုက်လိုက်သွားရာကနေ ..မလိုချင်တာတွေ တွေ့ရ၊ ဖြစ်ရနဲ့ လောကဓံရဲ့ ဒုက္ခဆိုတာကြီးကို သိသိသာသာ ထိတွေ့နေရပါတယ်။ ယခုဘလော့မှာ အဓိက ကျနော့်စေတနာကတော့ အဲ့ဒီ ဒုက္ခတွေကို နည်းစေချင်တဲ့စေတနာကြောင့် ဒီအကြောင်းကို ရေးမိလိုက်ခြင်းပါ။
ကျနော်အနေနဲ့ တစ်ခါတရံ ကားလမ်းမ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကို လမ်းထွက်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ လမ်းလျှောက်ရာမှာလည်း ကျနော့်မျက်လုံးက ငြိမ်ငြိမ်နေပါဘူး လမ်းဘေးဝဲယာ ရှာ စရာမရှိပဲ ဝေ့လှည့်ပြီး ရှာကြည့်တတ်ပါတယ် ။ စူးစမ်းသလို သဘောမျိုးပါ ။ တကယ်တော့ ဘယ်သူတွေမြန်းရှိလေမလဲ ပေါ့ ။ နောက်ပြီး ဘယ်လို ကောင်မလေး ချောချောလေးမြန်း ရှိလေမလဲ .. စသဖြင့် ကြည့်မိတာပါ ။ လမ်းပေါ်မှာဆိုတော့ လူတွေစုံသလို ပုံစံတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပါပဲ ။ လှတာတွေ ရှိသလို မလှတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ လှတာဆိုရင် ယောက်ျားလေး ဘာသာဘာဝ အရ မျက်စိတဆုံးကြည့်မိပြီး ၊ မလှတာဆိုရင်တော့ ဖြစ်ပျက်သဘောအရ မြင်ပြီး ချက်ချင်းပျက် ဆိုသလို ဆက်မကြည့်တတ်ပါဘူး ။ ဘယ်လိုရုပ်ပုံသဏ္ဍန်ပဲဖြစ်နေပါစေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် မကြည့့််တာ များပါတယ် ။
ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ၊လမ်းဘေက ဖြတ်သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားဆီကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စူးစမ်းတတ်တဲ့ စိတ်က ဖြန့်ကျက်မိပါတယ် ။ လှတာဆိုလည်း ဘာမှ မရတာ သိသိနဲ့ မျက်စိတဆုံး မြင်နိုင်သလောက်အထိ ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာလည်း ကျနော်တို့လို ယောက်ျားလေးများရဲ့ သဘာဝလို့ ဆိုချင်ပါတယ် ။ တခါတခါ ကိုယ်သိတဲ့သူများ ပါလေမလား ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကြည့်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ် ။ ကြည့်နေတဲ့ ခေါင်းဟာလည်း ချိန်သီးပါတဲ့ နာရီလိုပဲ ဟိုဘက်လွှဲလိုက် ဒီဘက်လွှဲလိုက်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်ကို မနေပါဘူး ။ အဲ့ဒီလို ဘာမှ မရမှန်းသိသိနဲ့ လိုက်ကြည့်နေမြဲပါပဲ။
အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေတာတွေကတော့ ကျနော့်စိတ်မှာ ဘရိတ်ဆိုတာ မရှိတဲ့ အချိန်ကပေါ့ ..။ ခု ကျနော် ဘရိတ် စတင်တပ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်ရုံပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ မြဲချင်မှလည်း မြဲပါမယ် ..။ မမြဲလည်း အစကထက်တော့ ပိုပြီး အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ် ..။ ကျနော်တို့အကြည့်တွေဟာ လှပတဲ့ သာယာမှုတွေအပေါ် ၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာ လိုက်ပြီး စိတ်ယိုင် တတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို စိတ်မျိုးနဲ့ လှတဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်ကို မြင်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ စိတ်မှာ ဖြစ်နေကြအတိုင်း ဆက်ပြီး လိုက်ကြည့်မိတတ်ပါတယ် ။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ မြင်နေတဲ့ အရုံ အတွေးစကို အရေးကြီးသလား မကြီးဘူးလား ခွဲခြားပြီး အရေးမကြီးတာတွေအပေါ်မှာ စိတ်အာရုံကို ဖြတ်တောက်ပစ်သလို အကြည့်ကိုလွဲပစ်ကြည့်ပါ။ ပထမတော့ ခက်ပေမဲ့ နောက် လုပ်ရလွယ်ကူပါတယ် ။ ကျနော်ဆိုလိုချင်တဲ့ ဘရိတ်က အဲ့ဒါပါ ။ ( ဒါဆိုရင်တော့ ရည်စားတွေဘာတွေ လိုက်ပြီး ရှိတ်တာမှာ အဲ့လိုစိတ်ထားလိုက်ရင် ဘယ်မှာ ရည်းစားရတော့မလဲ ပေါ့ စသဖြင့် အထွန့်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း မဖြေရှင်းတတ်ပါ။ ရည်းစားအဖြစ် တွဲဖို့ ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ ရပ်ချင်မှ ရပ်ပါ .။ ဒါကလည်း ကိုယ့်သဘောပါပဲ ) ။ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ဖြတ်သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားကို လိုက်ငေးနေခြင်းဟာ အချိန်လည်း ကုန်ပါတယ် ..။ လူလည်း ပန်းချင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။ စိတ်လည်း မတည်ငြိမ်ပါဘူး ။ ဒါလေးလည်း လှတာပဲ ဟိုဟာလေးလည်း လှတာပဲ ဆိုပြီး အာရုံ အတောမသတ်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
လူတွေမှာ အာရုံခံစားချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ..စိတ်လိုရာ လိုက်ပြီး ကြီးမြတ်မှုတွေ ဖြစ်လာတာ ရှိသလို နိမ့်ကျမှုတွေ ဖြစ်ပြီး ကျဆုံးတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ယခု ကျနော်တို့တတွေမှာ ကြီးမြတ်မှု ဖြစ်စေမဲ့အရာနဲ့ နိမ့်ကျမှု ဖြစ်စေမဲ့ အရာကို ခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုပါတယ် ..။ အဲ့ဒီလို အမြင်တွေ အကြည့်တွေလိုပဲ .. စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုလည်း ဘရိတ် တပ်ထားခြင်းဖြင့် ဒုက္ခ နည်းစေပါလိမ့်မယ် ..။ တကယ်တော့ ဘရိတ်လို့ ဆိုမိခဲ့သော သတိတရားကို မိမိမှာ ရှိစေချင်လို့ပါ .။ မရှိလည်း ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် တိုးတက်ချင်ရင်တော့ ဂရုတစိုက် နေပေါ့ .. ။ ဒါပါပဲ .. ။ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပါ ..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးမိတာပါ ။ ထူးခြားချင်ရင် ထူးခြားအောင်နေ ..။ အကောင်းဖြင့် ထူးခြားချင်ရင် အကောင်းဖြစ်စေမဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် ထူးခြားအောင်နေပါ ။ မိမိတို့အနေနဲ့ နေသည်ဖြစ်စေ ၊ မနေသည်ဖြစ်စေ .. နာရီစက္ကန့်တွေကတော့ ရပ်နေမည်မဟုတ်ပါ .. ။
Posted in စိတျTagged သတိ
8 thoughts on “လူမှာ တပ်မဲ့ ဘရိတ်”
ဘရိတ်မရှိရင် ၊ ဘရိတ်ပေါက်ရင် ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။ အတွေးကော အရေးကော ကြိုက်တယ်ရှင်။
လာဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. သတိထားစရာမို့ မျှဝေဖြစ်တာပါ .. ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပါ ..။
အရမ်းရမ်းကိုကောင်းပါတယ်နော်….ဟဲဟဲ သိပ်သိပ်သိပ်ကို ကောင်းလွန်းနေပါတယ်…..
အရေးအကြောင်းဆို နောက်ဘရိတ်ကပျက် ၊ ရှေ့ဘရိတ်ဆွဲညှစ်လိုက်တော့ ဂျွန်းပြန်ကျသွားတယ်။
သူငယ်ချင်းေ၇ စာလေးက ကောင်းပါတယ်. သတိလေးကို ဆက်ထိန်းထားနော် သ၇ိတ်ကိုလဲမကြာမကြာစစ်နော်
အေးပါ သူငယ်ချင်းရာ .. ငါ စွမ်းနိုင်သမျှ ဆက်ထိန်းမှာပါ .. ကျေးဇူး ငါ ဘရိတ်တွေ တခါတခါ စစ်ဖို့ မေ့တတ်လို့ ..
ကောင်းတယ်ဗျာအကိုဘာနေရေးတဲ့စာတွေ…ကျွန်တော်လို ကိုယ်ဘ၀ကိုယ်တိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကျွန်တော်အတွက် တွန်းအားတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုဘာနေ စာကိုဖတ်ပီးတော့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကိုဘာနေ
ဟုတ်ဗျာ ညီလေးလို လူငယ် အများကြီးအတွက် စေတနာများဖြင့် ဆက်လက် ရေးနေအုံးမှာပါ .. ခုလိုလေး သိတတ်တဲ့သူများ များများရှိပါစေလို့သာ တောင်းဆုပြုပါတယ် ..